Guryo dabaqyo ah Kirada gudaha London
London waa caasimada iyo magaalada ugu weyn England iyo Boqortooyada Ingiriiska. Isagoo taagan wabiga Thames ee koonfurta-bari ee England, oo ku yaal meel 50-mile u jirta 80km oo u jiheysa dhinaca Waqooyiga Badda, London waxay degsiimad weyn u ahayd laba sano oo dhan. Londoninium waxaa aasaasay Roomaaniyiintii. Magaalada London, xudunta qadiimiga ah ee London - aag u jirta 1.12 mayl laba jibaaran (2.9 km2) iyo isu-tagga loo yaqaan 'Square Mile' - waxay haysataa soohdin si dhaw ula socota xuduudeeda dhexe. Magaalada Westminster sidoo kale waa xaafada Magaalada London gudaheeda ee haysata maqaamka magaalada. London Greater waxaa xukuma Duqa Magaalada London iyo Golaha Magaalada London.London waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin magaalooyinka adduunka ugu muhiimsan uguna caansan adduunka waxaana loogu yeeraa kuwa ugu awooda badan adduunka, ugu mudan, ugu saameynta badan, ugu booqashada badan, ugu qaalisan, hal-abuurka, waara, ugu maal-saaxiibtinimada badan, iyo magaalada ugu caansan-shaqada-shaqada. London waxay saameyn weyn ku leedahay farshaxanka, ganacsiga, waxbarashada, madadaalada, moodada, maaliyadda, daryeelka caafimaadka, warbaahinta, adeegyada xirfadleyda, cilmi baarista iyo horumarka, dalxiiska iyo gaadiidka. Magaalada London ayaa kaalinta 26-aad ka jirta 300-ka magaalo ee ugu waaweyn waxqabadka dhaqaalaha. Waxay ka mid tahay xarumaha dhaqaalaha ugu weyn waxayna leedahay midda shanaad ama lixaad ee magaalo weynta weyn ee GDP. Waa magaalada inta badan la booqdo sida lagu qiyaaso soogalootiga caalamiga ah waxayna leedahay nidaamka garoonka diyaaradaha ee ugu mashquulka badan sida lagu qiyaaso gaadiidka rakaabka. Waa meesha ugu horeysa ee maalgashiga, martigelinta tafaariiqda caalamiga ah iyo shakhsiyaadka aadka u sarreeya ay ka badan yihiin magaalooyinka kale. Jaamacadaha London ayaa ah jaamacadaha ugu badan ee jaamacadaha ku yaal, iyo London waxaay hoy u tahay machadyo si heer sare ah loo soo agaasimay sida Imperial College London oo ku takhasusay cilmiga bulshada iyo kulliyadaha, London School of Economics ee cilmiga bulshada, iyo kuliyada dhameystiran ee Jaamacada London iyo King's College. London. Sanadkii 2012, London waxay noqotay magaaladii ugu horreysay ee martigelisa saddex Ciyaaraha Olimbikada Xagaaga ah ee casriga ah .London waxaa ku yaal dad iyo dhaqamo kala jaad ah, in kabadan 300 oo luuqadood ayaa looga hadlaa gobolka. Qiyaasteeda bartamihii-sanadka ee dadweynaha degmada (oo u dhiganta Greater London) waxay ahayd 8,908,081, waana magaalada saddexaad ee ugu dadka badan magaalo kasta oo Yurub ah waxayna ku kacdaa 13.4% dadweynaha UK. Magaalada London ayaa ah magaalada saddexaad ee ugu dadka badan Yurub, wixii ka dambeeya Moscow iyo Paris, iyadoo tirakoobkii 2011 la sameeyey 9,787,426. Guri-dheereedka London waa midka ugu dadka badan Yurub marka loo eego 14,040,163 deggane 2016. Kahor Brexit, London waxay ahayd magaalada ugu weyn Midowga Yurub. London waxaa ku jira afar goobood oo dhaxalka adduunka ah: Tower of London; Beeraha Kew; goobta oo ka kooban Palace of Westminster, Westminster Abbey, iyo Kaniisadda St Margaret; iyo degsiimada taariikhiga ah ee Greenwich halkaas oo Royal Observatory, Greenwich ay ku qeexeyso Prime Meridian (Longitude 0 °) iyo Waqtiga Greenwich. Meelaha kale ee calaamadaha laga helo waxaa ka mid ah Buckingham Palace, London Eye, Piccadilly Circus, St Paul Cathedral, Tower Bridge, Trafalgar Square iyo The Shard. London waxay leedahay matxafyo fara badan, maktabado, maktabado iyo dhacdooyin isboorti. Kuwaas waxaa ka mid ah Matxafka Ingiriiska, Madxafka Qaranka, Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah, Tate Casriga, Maktabadda Ingiriiska iyo tiyaatarada West End. Dhismaha dhulka hoostiisa mara ee London waa shabakad tareenka ugu qadiimsan dhulka hoostiisa ee adduunka.